Iindaba - I-infrared thermal camera imaging ene "qondo lobushushu "
Ukukhanya kwendalo kudityaniswa ngamaza okukhanya anee-longuevels ezahlukeneyo. Uluhlu olubonakala kwiliso lomntu yi-390-780nm. Amaza ombane amafutshane kune-390nm kwaye angaphezulu kwe-780nm awakwazi ukuviwa ngamehlo omntu. Phakathi kwawo, amaza ombane onobude obungaphantsi kwama-390nm angaphandle kwe-violet yesibane sokukhanya esibonakalayo kwaye abizwa ngokuba yimitha ye-ultraviolet; amaza ombane ixesha elide ngaphezu kwe-780nm angaphandle kobomvu obubonakalayo bokukhanya kwaye abizwa ngokuba yi-infrared, kwaye ubude bawo buvela kwi-780nm ukuya kwi-1mm.
I-infrared yigagasi yombane ene-wavelength phakathi kwee-microwave kunye nokukhanya okubonakalayo, kwaye inezinto ezifanayo njengamaza erediyo kunye nokukhanya okubonakalayo. Kwimvelo yendalo, zonke izinto ezinobushushu obuphezulu kune-zero (-273.15 ° C) ngokuqhubekayo zikhupha imitha ye-infrared. Le nto ibizwa ngokuba yimitha yobushushu. Itekhnoloji ye-infrared thermal imaging isebenzisa isixhobo sokujonga imitha eshushu eshushu, injongo yokucinga ye-optical kunye nenkqubo yokuskena kwe-opto-mechanical ukufumana imiqondiso ye-infrared radiation yento eza kulinganiswa, kunye nepateni yokusasaza amandla e-infrared radiation ibonakaliswa kwinto ye-photosensitive ye-infrared detector emva kokuhluza okubonakalayo kunye nokucoca indawo, oko kukuthi, umfanekiso we-infrared thermal wento elinganisiweyo iskenwe kwaye ijolise kwiyunithi okanye kumtshina obonakalayo, amandla e-infrared radiant aguqulwa ngumtshini abe ngumqondiso wombane, owandisiweyo waguqulwa waba yividiyo esemgangathweni uphawu, kwaye lubonakalise njengomfanekiso we-infrared thermal kumfanekiso weTV okanye esweni.
I-infrared yigagasi yombane ene-essence efanayo njengamaza omoya kunye nokukhanya okubonakalayo. Ukufunyanwa kwe-infrared kukutsiba ekuqondeni komntu indalo. Itekhnoloji esebenzisa isixhobo esikhethekileyo se-elektroniki ukuguqula ukusasazwa kobushushu kumphezulu wento ibe ngumfanekiso obonakala kwiliso lomntu kwaye ubonise ukuhanjiswa kobushushu kumphezulu wento ngemibala eyahlukeneyo kuthiwa yi-infrared thermal imaging technology. Esi sixhobo se-elektroniki sibizwa ngokuba ngumfanekiso we-infrared thermal.
I-infrared thermal imager isebenzisa i-infrared detector, injongo ye-imaging ye-optical kunye ne-opto-mechanical scanning system (i-teknoloji ye-plane ejongene neyona ndlela ihamba phambili isusa inkqubo ye-opto-mechanical scanning) ukufumana iphethini yokuhambisa amandla e-infrared yento enokulinganiswa kwaye ibonakalise kuyo I-photosensitive element ye-infrared detector. Phakathi kwenkqubo ye-optical kunye ne-infrared detector, kukho i-optical-mechanical scanning mechanism (i-focal plane imager ayinayo le ndlela) ukuskena umfanekiso we-infrared thermal wento enokulinganiswa kwaye ugxininise kwiyunithi okanye kwi-detector ye-spectroscopic . Amandla e-infrared radiant aguqulwa abe ngumqondiso wombane ngumtshini, kwaye umfanekiso we-infrared thermal uboniswa kwiscreen seTV okanye esweni emva kokukhulisa kunye nokuguqula kumqondiso wevidiyo oqhelekileyo.
Olu hlobo lomfanekiso wobushushu luhambelana nendawo yokuhambisa ubushushu ebusweni bento leyo; Eyona nto ibalulekileyo, ngumzobo osasazekayo wokuhanjiswa kwemitha yelitha nganye yento eza kulinganiswa. Kuba umqondiso ubuthathaka kakhulu, xa kuthelekiswa nomfanekiso wokukhanya obonakalayo, awunamlinganiso kunye nobukhulu besithathu. Ukuze ugwebe intsimi yokuhambisa ubushushu infrared yento ukuba ilinganiswe ngokukuko kwinkqubo yokwenyani, amanyathelo athile abancedisayo ahlala esetyenziselwa ukwandisa imisebenzi ebonakalayo yesixhobo, njengokulawulwa komfanekiso wokuqaqamba nokungafaniyo, umgangatho wokwenyani ukulungiswa, umbala ongamanga wobumba kunye ne-histogram yokusebenza kwemathematika, ukuprinta, njl.
Iikhamera ze-Thermal imaging ziyathembisa kwishishini likaxakeka
Xa kuthelekiswa neekhamera ezikhanyayo zemveli ezixhomekeke ekukhanyeni kwendalo okanye ukukhanya kweekhamera, iikhamera ze-thermal azifuni kukhanya, kwaye ngokucacileyo zinokuthembela kubushushu be-infrared obukhutshwe yinto ngokwayo. Ikhamera yokucinga ye-thermal ilungele nayiphi na imeko yokukhanyisa kwaye ayichaphazeli kukukhanya okuqinileyo. Iyakwazi ukubona ngokucacileyo kwaye ifumane iithagethi, kwaye ichonge iithagethi ezifihliweyo kunye nefihliweyo ngaphandle kwemini okanye ebusuku. Ke ngoko, inokuqonda ngokwenyani ukubekwa kweliso kwiiyure ezingama-24.